Orinasa fivarotana akanjo an-tserasera amidy Archives - BusinessFinder.Me
Amidy am-barotra ny akanjo an-tserasera
Atrikasa garazy fiara amidy any Dubai
Misy trano fisakafoanana amidy any Dubai
Trano fandidiana andro amidy any Dubai
Ivon-toeram-pandidiana andro (teatra fandidiana 2, fandriana aorian'ny fandidiana 4, efitrano fizahana 5) amidy amin'ny trano nohofana. Metro Internet Dubai City City ...
Fivarotana hoso-doko amidy any Dubai
Amidy amidy fiara any Dubai
Mihazakazaka tsara ny orinasantsika miaraka amin'ireo mpanjifa tsy mivadika isan'andro. 40.000 AED (azo ifampiraharahana)
Fanamarihana: azo ifampiraharahana ny vidiny Ny fotodrafitrasa: Toeram-panaingoana feno rivotra miaraka amin'ny haavon'ny tany sy mezaninina. Tany ambany: 6742 ft. Mezzanine gorodona: 58 ...
Orinasa mpivarotra voninkazo amidy any Dubai
FANATSINANA 15 JOLY Nandeha tokoa ny dia; mitombo Iris & May avy amin'ny hevitra tsotra amin'ny 2019, mianatra ny tsena eo an-toerana, voninkazo amin'ny maha orinasa, e-com ...
Fivarotana finday amidy any Dubai
Fivarotana lehibe amina toerana voalohany amidy (610 sqft) Ny stock dia misy (stock stock AED 20000) haingon-trano natao ho an'ny birao AED 25000 ambony rihana ...
Orinasa mandinika antsipiriany momba ny fiara amidy any Dubai
Trano fisakafoanana pakistaney amidy any Dubai al wasel road nere boxpark. Fivarotana isan'andro 1500to hatramin'ny 1700 tsy misy fanaterana. Varotra maika Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa ...
Supermarket mihazakazaka azo amidy any SHARJAH - AL NAHDA, Fivarotana tena madio sy madio, faritra feno olona, ​​manana fahazoan-dàlana (manan-kery mandritra ny 6 volana) Deposit m ...
Ny fihazakazahana dia mahazo fivarotana Saloon miaraka amin'ny fahazoan-dàlana amidy any Dubai
Ny fihazakazahana dia mahazo fivarotana anyalo miaraka amin'ny fahazoan-dàlana amidy. Ireo mpividy matotra ihany no mifandray amiko azafady. Toerana: Sharjah Muweillah Commercial (Sc ...
Supermarket amin'ny legioma voankazo amidy any Dubai
Salon Sal ho an'ny fanofana any Dubai
Salon Sal ho any amidy amin'ny hotely any dubai marina. Trano marobe eo akaikin'ny hotely .fitoerana fijanonana fiara maimaim-poana rehetra ilaina amin'ny fifandraisana Mifandraisa aminay
65,000.00AED (Azo ifampiraharahana)
Gent's Salon amidy any Dubai
Gents Salon gorodona ambany: seza 6 + seza fanasana volo 2 + efitrano fitahirizana Mezzanine: efitrano VIP + efitrano fanaovana tarehy tarehy & vatana + seza pedikyorika 2 + pantry + no ...
Lady's Salon ao amin'ny Al Barsha Mall amidy any Dubai
Supermarket tsara mihazakazaka miaraka amina sehatra an-tserasera amidy ao amin'ny tanàn-dehibe. ho an'ny antsipirian'ny fifandraisana
Orinasa mpandrafitra amidy amidy any Dubai
Orinasa mpandrafitra miaraka amin'ny milina sy fitaovana ary fitaovana feno miaraka amin'ny haingon-trano momba ny haingon-trano sy famolavolana birao miaraka amin'ny birao Mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany bebe kokoa
Toeram-pitsaboana nify efa tafaorina ao Dubai, amidy. AED 3.5 tapitrisa / - Miaraka amin'ny sampana 1 ao amin'ny Zabeel Street. Klinika roa ny lehibe dia manana nify 3 ...
Bakery amidy any Dubai
Fivarotana fivarotana mofo malaza amidy. Ny orinasa dia manana ny mari-pahaizana famokarana rehetra ao anatin'izany ny ISO sy HACCP. Ny orinasa dia manana AED 500,000 amin'ny zon'ny tsena ...
Bakery lehibe tsara amidy any Dubai
Jebel Ali Industrial Area 1, Jebel Ali Industrial Area, Jebel Ali, Dubai, UAE
Miasa tanteraka mandritra ny 5 taona ny orinasa amidy ao amin'ny faritra indostrialy Jebel Ali izay mamokatra mofo fisaka amin'ny karazany rehetra. HACCP voamarina ary nifanarahana wi ...
Atrikasa akanjo amidy any Dubai
Amidy ny atrikasa fitafiana Mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany bebe kokoa…
Big Laundry tena tsara indrindra amin'ny orinasa Azo amidy any Dubai
Ny amidy dia fanasan-damba indostrialy roa ambin'ny folo taona malaza any DIP izay misy 3.5 Ton manana / andro. Ny vola miditra isan-taona dia 1.5M AED, manana mpiasa 16, 4 ...